Wararka - Kala hadal warshad heer caalami ah Manitowoc oo ka wada hadal mustaqbalka wadajirka!
Subaxnimadii Sebtember 3, Mudane Lei Wang, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Suuqyada Ganacsiga ee Manitowoc Tower Machinery iyo Madaxweynaha Gobolka Shiinaha, iyo xisbigiisa waxaa lagu casuumay inay booqdaan Grace.
Labada dhinac waxay si qoto dheer oo xamaasad leh isu weydaarsadeen wax soo saarka caatada ah ee soosaarka horumarsan, maaraynta tayada, casriyaynta wax soosaarka iyo kobcinta tayada.
Isaga oo hogaamiye ka ah warshadaha wiishka adduunka, Mr. Wang wuxuu horudhac faahfaahsan ka bixiyay geeddi-socodka horumarinta wax soo saarka caatada ah ee Manitowoc. Seddex sano ka hor, warshadaha wiishka ee wiishka Shiinaha ayaa wali ku jiray marxaladda fuulitaanka. Xaaladaha adag ee jira iyo sida ay kor ugu kacayso sumcadaha Shiinaha, ma ahan hawl fudud in la keeno summad caalami ah oo quus ku jirta wadada saxda ah.
Manitowoc, isbeddelada seddexdii sano ee la soo dhaafay ma sahlana. Mudane Wang, oo ku wanaagsan raadinta fursadaha xaaladaha ka soo horjeedka, wuxuu sameeyaa dadaal badan si uu wax uga beddelo. Iyada oo ku saleysan Manitowoc's wax soo saarka muhiimka ah ee adduunka-Zhangjiagang Factory, wuxuu hagay falsafadiisa ganacsi ee guuleysatay xilliyadii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan howlaha caatada ah ee ku lug leh dhammaan shaqaalaha, iyo baahida macaamiisha. Horumarinta naqshadeynta badeecada ee shirkadda ayaa si dhakhso leh looga hirgeliyey Manitowoc, waxaana lagu dhex daray gobolka Aasiya iyo Baasifigga iyo suuqa Shiinaha. Seddexdii sano ee la soo dhaafay waxay gaareen guulo la taaban karo.
Hirgelinta, diiradda saarista faahfaahinta iyo waxqabadyada hoos u dhaca kor iyo hoos ee dhammaan shaqaalaha, ma aha oo kaliya kicinta tamarta wanaagsan ee shaqaalaha, laakiin sidoo kale waxay abaabuleen dadaal iyo xamaasad. Khibrad yar oo la uruuriyey iyo xariifnimada xigmadii shaqaalaha, ayaa lagu daray macno dheeri ah marka la eego habka wax soo saarka, habka wax soo saarka, qalabka iyo qalabaynta warshad caqli iyo otomaatig ah oo ku taal Zhangjiagang. Hawlaha caatada ah ee laga hirgaliyay warshada Zhangjiagang sanadihii ugu dambeeyay waxay Manitowoc Potain u suurta galisay inuu si dhab ah uga helo faa iidada warshada. Xakamaynta tayada, waxsoosaarka wax soo saarka, soosaarka aag kasta, iyo kharashaadka waxsoosaarka ayaa si isdaba joog ah loo hagaajiyay.
U hogaansanaanta ruuxa farsamada gacanta ee "noqoshada kan ugu fiican", Grace waxay sii wadaa inay wax ka barato guulaha shirkadaha heerka caalami, horumar joogto ah, siinta macaamiisha wax soo saar tayo sare leh oo hufan iyo adeegyo waa waddo cad oo loogu talagalay Grace inay horumariso. "Ku dar boqolaal wabi wershadaha badda, ka fikir hore oo guuleysta mustaqbalka."